प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले नारायणकाजीलाई भने- पार्टी प्रवक्ताको लाज त जोगाउनुस् :: Setopati
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद कुनै निकास नपाएर अड्किएको छ।
अहिले दुबै पक्ष न विवाद सुल्झाएर अघि बढेका छन् न त समाधानका लागि तीव्र छलफलमा नै छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीइतरका नेताहरूले अहिलेको विवाद पदका लागि नभई विधि र पद्धतिका लागि भएको बताउँदै आएका छन्।
विधि र पद्धतिको कुरा गर्नेमध्येका एक हुन्, पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका नेकपा सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ।
गत बुधबार राजधानीमा आफूनिकट सय बढी पत्रकारलाई बोलाएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल र श्रेष्ठले ओलीको कार्यशैलीको विरोध गरेका थिए।
त्यसको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले श्रेष्ठलाई सार्वजनिक रूपमा पार्टी प्रवक्ताको लाज जोगाउन भनेका हुन्।
शुक्रबार बिहान नारायणकाजीलाई मेन्सन गर्दै रिमालले लेखेका छन्- इनफ इज इनफ नारायणकाजी जी। कमसेकम पार्टी प्रवक्ता पदको लाज त जोगाउनुस। ‘विधी र पद्दति’को नक्कली गीत गाउँदै नेताहरूलाई गुटबन्दीको आगोमा पोल्न उत्तोलक नबन्नुहोस्! पार्टी एकताविरूद्धका कुनैपनि गतिविधि कतैबाट पनि नहोस्! मुलुक संवेदनशील मोडमा छ महसुस होस्!
रिमालले प्रयोग गरेको इनफ इज इनफ पछिल्लो समय सरकारले कोरोनाभाइरसविरूद्धको लडाइँमा लगातार गरिरहेका गल्ती र वेवास्ताविरूद्धको आन्दोलनको नाममा प्रयोग भइरहेको छ।
रिमालले प्रवक्ता श्रेष्ठलाई के सन्दर्भमा पदको लाज जोगाउनुस् भनेका हुन्? हामीले यो प्रश्न रिमाललाई नै सोध्यौं।
‘उहाँ पार्टी प्रवक्ता हुने तर गुटहरूमा सामेल हुने अनि ती गुटका भेला उहाँले विधि र पद्धतिका कुरा गर्ने। जसरी मैले बोलेका कुरा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बोलेको हुन्छ, त्यसरी नै उहाँले बोलेका कुरा पार्टीको आधिकारिक कुरा हुनुपर्छ,’ रिमालले सेतोपाटीसँग भने,‘पार्टीमा विवाद भएका बेला प्रवक्ता त झन् सन्तुलनकारी भूमिकामा हुनुपर्नेमा उहाँ एकपक्षीय भएकाले मैले त्यस्तो लेखेको हुँ।’
रिमालले पछिल्लो समय प्रवक्ता श्रेष्ठ पार्टी विवादबारे पत्रकार भेला गराउँदै हिँडेको आरोप लगाए।
‘अस्ति बुधबार पनि पत्रकारलाई भेला पार्नुभयो। आज पनि सम्पादकहरूसँग छलफल गराउन खोज्नु भएको थियो रे, अहिले रोकियो भन्ने सुन्छु,’ रिमालले भने,‘अहिले नेकपाको प्रवक्ताले पत्रकार भेला गर्दै हिँड्नु पर्ने आवश्यकता छैन।’